ဒီသုံးချက်နဲ့ကိုက်ညီနေရင်တော့ ယူတို့က ဥာဏ်ကြီးရှင်တွေပဲ – Trend.com.mm
ကဲ ဘယ်လိုအချက်တွေက သင့်ကိုဥာဏ်ကြီးရှင်ဖြစ်စေတာလဲ?
ရှုပ်ရှုပ်ပွပွနေတတ်တာလား?နောက်ကျမှအိပ်တတ်တာလား?မကြာခဏဆိုသလို ဆဲရေးတိုင်းထွာတတ်သူလား?ဒီလို မကောင်းတဲ့အကျင့်ဆိုးသုံးခုဟာ တကယ်တော့ ဥာဏ်ကြီးရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ လက္ခဏာပါတဲ့။ဘာလုိ့ဒီလိုပြောနိုင်တာလဲ?
ဘယ်နေရာရောက်ရောက် အမြဲသင်ရောက်တဲ့နေရာမှာရှုပ်ပွနေတတ်တာလား? ဒါက သတင်းကောင်းတစ်ခုပါပဲ။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရှင် Kathleen Vohs ရဲ့ ပြောကြားချက်အရ ရှုပ်ပွနေတဲ့စားပွဲခုံနဲ့ ရှုပ်ပွနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ ဥာဏ်ရည်မြင့်ခြင်းရဲ့ သင်္ကေတပဲလို့သိရပါတယ်။ရှုပ်ပွနေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က ဖန်တီးတီထွင်နိုင်စွမ်းကိုပိုမြင့်မားစေပါတယ်တဲ့။ပြောချင်တာက ဒီလိုရှုပ်ပွနေတာကိုမြင်ရတာ အိုင်ဒီယာများများထွက်တယ်ပေါ့။
ညအိပ်ရာဝင်နောက်ကျတာက မကောင်းတာဆိုလို့ မနက်မိုးလင်းလို့နိုးတဲ့အခါ အနည်းငယ်ပင်ပန်းပြီးအိပ်ရေးမ၀သလိုဖြစ်နေရုံပါပဲတဲ့။လေ့လာချက်တွေအရ ဥာဏ်ကောင်းတဲ့ကလေးတွေဟာ အိပ်ရာဝင်နောက်ကျတတ်သလို မနက်မိုးလင်းတဲ့အခါမှာလည်းနောက်ကျမှနိုးတတ်ကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ညအိပ်ရာဝင်နောက်ကျတယ်ဆိုတာ အဲ့ဒီကလေးတွေက မပြီးပြတ်သေးတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေလို့၊မနက်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်အစီအစဉ်ဆွဲနေလို့၊သူများတွေထက်ကိုယ်ကအမြဲသာချင်လို့ကြိုးစားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲတဲ့။
ဆဲရေးတိုင်းထွာတာကိုအားပေးနေတာမဟုတ်ပေမဲ့လည်း လေ့လာချက်တွေအရ ဒီလိုဆဲရေးတိုင်းထွာတာဟာ ဥာဏ်ရည်မြင့်ကြောင်းပြနေတဲ့သင်္ကေတလို့တွေ့လာရပါတယ်။ဒီလိုဆဲရေးတိုင်းထွာတဲ့စကားလုံးကိုမကြာခဏပြောဆိုတတ်တာဟာ စကားလုံးကန့်သတ်ထားတဲ့သူတွေထက် စကားပြောပြတ်သားတယ်။အာစလျှာစပြင်းတယ်ဆိုတာပြသနေတာပါ။စိတ်ထဲမှာမြိုသိပ်မထားတတ်ဘူးဆိုတာလည်းပြနေပါတယ်။ကိုယ်ဆဲချင်ပေမဲ့ မဆဲပဲမြိုသိပ်ထားတဲ့သူတွေထက်စာရင်သူတို့က စိတ်ဖိစီးမှုလည်းပိုပြီးလျော့နည်းတာတွေ့ရပါတယ်။
ကဲ ဒီသုံးချက်နဲ့ညီနေရင်တော့ ဂုဏ်ယူပါတယ်။သင်က ဥာဏ်ကြီးရှင်ပါပဲ။
ကဲ ဘယျလိုအခကျြတှကေ သငျ့ကိုဉာဏျကွီးရှငျဖွဈစတောလဲ?
ရှုပျရှုပျပှပှနတေတျတာလား?နောကျကမြှအိပျတတျတာလား?မကွာခဏဆိုသလို ဆဲရေးတိုငျးထှာတတျသူလား?ဒီလို မကောငျးတဲ့အကငျြ့ဆိုးသုံးခုဟာ တကယျတော့ ဉာဏျကွီးရှငျတဈယောကျရဲ့ လက်ခဏာပါတဲ့။ဘာလို့ဒီလိုပွောနိုငျတာလဲ?
ဘယျနရောရောကျရောကျ အမွဲသငျရောကျတဲ့နရောမှာရှုပျပှနတေတျတာလား? ဒါက သတငျးကောငျးတဈခုပါပဲ။စိတျပိုငျးဆိုငျရာပညာရှငျ Kathleen Vohs ရဲ့ ပွောကွားခကျြအရ ရှုပျပှနတေဲ့စားပှဲခုံနဲ့ ရှုပျပှနတေဲ့ပတျဝနျးကငျြဟာ ဉာဏျရညျမွငျ့ခွငျးရဲ့ သင်ျကတေပဲလို့သိရပါတယျ။ရှုပျပှနတေဲ့ ပတျဝနျးကငျြက ဖနျတီးတီထှငျနိုငျစှမျးကိုပိုမွငျ့မားစပေါတယျတဲ့။ပွောခငျြတာက ဒီလိုရှုပျပှနတောကိုမွငျရတာ အိုငျဒီယာမြားမြားထှကျတယျပေါ့။
ညအိပျရာဝငျနောကျကတြာက မကောငျးတာဆိုလို့ မနကျမိုးလငျးလို့နိုးတဲ့အခါ အနညျးငယျပငျပနျးပွီးအိပျရေးမဝသလိုဖွဈနရေုံပါပဲတဲ့။လလေ့ာခကျြတှအေရ ဉာဏျကောငျးတဲ့ကလေးတှဟော အိပျရာဝငျနောကျကတြတျသလို မနကျမိုးလငျးတဲ့အခါမှာလညျးနောကျကမြှနိုးတတျကွတယျဆိုတာတှရှေိ့ခဲ့ရပါတယျ။ညအိပျရာဝငျနောကျကတြယျဆိုတာ အဲ့ဒီကလေးတှကေ မပွီးပွတျသေးတဲ့အလုပျတှကေိုလုပျနလေို့၊မနကျဘာလုပျရမယျဆိုတာကိုကွိုတငျအစီအစဉျဆှဲနလေို့၊သူမြားတှထေကျကိုယျကအမွဲသာခငျြလို့ကွိုးစားနတေဲ့အတှကျကွောငျ့ပါပဲတဲ့။
ဆဲရေးတိုငျးထှာတာကိုအားပေးနတောမဟုတျပမေဲ့လညျး လလေ့ာခကျြတှအေရ ဒီလိုဆဲရေးတိုငျးထှာတာဟာ ဉာဏျရညျမွငျ့ကွောငျးပွနတေဲ့သင်ျကတေလို့တှလေ့ာရပါတယျ။ဒီလိုဆဲရေးတိုငျးထှာတဲ့စကားလုံးကိုမကွာခဏပွောဆိုတတျတာဟာ စကားလုံးကနျ့သတျထားတဲ့သူတှထေကျ စကားပွောပွတျသားတယျ။အာစလြှာစပွငျးတယျဆိုတာပွသနတောပါ။စိတျထဲမှာမွိုသိပျမထားတတျဘူးဆိုတာလညျးပွနပေါတယျ။ကိုယျဆဲခငျြပမေဲ့ မဆဲပဲမွိုသိပျထားတဲ့သူတှထေကျစာရငျသူတို့က စိတျဖိစီးမှုလညျးပိုပွီးလြော့နညျးတာတှရေ့ပါတယျ။
ကဲ ဒီသုံးခကျြနဲ့ညီနရေငျတော့ ဂုဏျယူပါတယျ။သငျက ဉာဏျကွီးရှငျပါပဲ။